Wareysi: Hooyo Qaali oo ka hadashay natiijada kasoo baxday baaritaanka kiiska Ikraan - Caasimada Online
Home Warar Wareysi: Hooyo Qaali oo ka hadashay natiijada kasoo baxday baaritaanka kiiska Ikraan
Wareysi: Hooyo Qaali oo ka hadashay natiijada kasoo baxday baaritaanka kiiska Ikraan
Muqdisho (Caasimada Online) – Qaali Maxamuud Guhaad oo ah hooyada dhashay Ikraan Tahliil Faarax ayaa ka hadashay natiijadii baaritaanka kiiska gabadheeda ee galabta uu sii daayey xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Cabdullahi Buulakamey, kaas oo kiiska ka beriyeelay saraakiisha hey’adda NISA oo tuhun badani uu dul-hoganayo.
Hooyo Qaali oo la hadashay Idaacadda VOA ayaa warbixintii xeer ilaaliyaha ku tilmaantay wax qaldan oo ay soo abaabuleen raggii lagu tuhmaayey kiiska gabadheeda, isla markaana sarkaalka soo bandhigay warbixintaan uusan ku jirin dadkii ay u xil-saarteen baaritaan kiiskaan.
“Farmaajo, Fahad iyo kuwii gabadheyda dhibaateeyey ayaa ka soo shiray waxaan, mana aqbaleyno, umada Soomaaliyeedna kuma qanceyso, intii gabadheydu maqneed ayaa laga soo shaqeynaayey beentaan,” ayey tiri Hooyo Qaali.
Sidoo kale Hooyo Qaali waxay sheegtay in Buulakamey uusan wax shaqo ah ku laheyn baaritaanka kiiska gabadheeda, “Xeer ilaaliyihii dacwada iga qoray ee galkeyga gacanta ku hayey ma ahan ninka galabta dhawaaqay, ninkaan waxaa soo adeegsaday Farmaajo, Fahad iyo Kullane Jiis, ma aqaano, waligeyna wax uma dirsan,” ayey hadalkeeda ku sii dartay Hooyo Qaali Guhaad.
Maamo Qaali oo quus badani ay ka muuqatay ayaa sheegtay in Soomaaliya aysan cadaaladi ka jirin oo Alle ay cadaalad uga baryeyso, “Nimankii gabadheyda dhibaateeyey ayaa lagu leeyahay waxay soo baareen, wax ka jira maleh, waa meel la isugu xoog sheegto,” ayey tiri Hooyo Qaali.
Sidoo kale Hooyada dhashay Ikraan Tahliil waxay sheegtay in weli ay kalsooni ku qabto Ra’iisul wasaare Rooble oo ay ka sugeyso inuu warbixin ka siiyo hanaanka loo maray hadii uu jiro baaritaan la sameeyey.
Xeer-ilaaliyaha Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida Jeneraal Cabdullaahi Buulle Kameey oo shaciyey natiijada kiiska Ikraan ayaa sheegay in Guddiga baarista oo ka kooban xeer ilaaliyaha guud, ku-xigeenkiisa iyo Sarkaal ka tirsan NISA ay marka hore go’aamiyeen in dib loo wareysto dhamaan dadkii cabashada ay ka taalay xafiiska.
Baaritaan kadib natiijadii u soo baxday ayuu Buulakamey ku soo koobay seddax qodob oo kala ah:
Hoos ka dhageyso wareysiga Hooyo Qaali Guhaad